Waadinews | Somali News and Entertainments | Archive | Somalia
Home » Archives by category » Somalia
Xisbiga Ucid Oo Sheegay In Shirkoodii Golaha Dhexe Lagu Qaban Doono Magaalada Burco
Hogaanka sare ee xisbiga ucid ayaa ku dhawaaqay in shirkii golaha dhexe ee xisbiga ucid lugu qaban doono magaalada burco xubno cusub na magacaabay
Waxa Jira Khilaaf balaadhan ka dhex taagan shiinaha iyo maraykan kaas sameeyay dhaqaalo badan oo labada dhinacba ah uguna weyntahay shirkada Huawei oo bileelo badan laga xanimay
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka gobolada iyo Muqdisho isku xira oo ku kacaya 60 milyan oo Euro. Heshiiskan ayaa waxaa maanta wasa saxiixday wasiirka Qorshaynta, maal-gashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Jamal Maxamed Xasan, iyo safiirka midawga Yurub ee Soomaaliye Mr. Nicolas Berlanga […]
Xukumada somaliland ayaa markii labaad ka hashay shirka uu ku dhawaqay boqor buurmadaw
Halkuu Ku Danbeeyay Khilaafkii Dhinaca Ganacsiga ee u dhaxeeyay usa iyo china
Waxa sii xoogaysanaya khilaafka u dhaxeeya maraykan iyo shiinaha ee dhanka ganacsiga
Guddoomiyaha gobolka maroodi jeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa xaqiijiyey in wiil yar oo 14 jir ah uu ku geeriyooday danab ku haleelay miyiga dagmada Sallaxlay. Guddoomiyaha oo la hadlay Tv-g Horn Cable ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:” 24-kii saacadood ee u dambeeyey roobab mahiigaan ah ayaa ka da’ayey guud ahaan dalka Somaliland gaar ahaan […]
Madaxweynaha dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaa garoonka diyaaradaha Bole ku soo dhoweeyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya. Wafdiga Madaxweynaha ayaa ka soo kicitimay magaalada Makkah Al-Mukarama, halkaasoo ay uga qeyb galeen shirarka Hoggaamiyeyaasha Jaamacadda Carabta iyo kuwa Iskaashiga Islaamka. Socdaalka Madaxweyne Farmaajo […]
Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Y. Yamamoto ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo, waxaana uu la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Madoobe”, sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Ajandeyaashii lagu gorfeeyay kulankaas waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda qaranka, nabadda iyo amniga. Qoraal lasoo dhigay bogga Facebook-ga ee uu leeyahay howlgalka Mareykanka ee […]
Ma Dhabbaa In Kuuriyada Waqooyi Ay Dishay Ninkii Soo Qabanqaabiyey Shirkii Trump Iyo Hoggaamiyahooda
Wargays ka soo baxa Kuuriyada Koonfureeda ayaa sheegay in xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay dishay danjiraheedii khaaska ahaa ee Maraykanka kaddib markii uu guul-darro ku soo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Maraykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku wada yeesheen caasimadda Vietnam ee Hanoi. Wargayskan oo lagu magacaabo “Chosun Ilbo” ayaa intaa ku daray in danjire […]
Waa Kuma Ergayga Cusub Ee Qaramada Midoobay U Magacawday Soomaaliya?
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa wakiilkiisa gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay James Swan, oo ah diblomaasi u dhashay dalka Maraykanka. Mr Swan ayaa sidoo kale loo xushay inuu noqdo madaxa xafiiska qaramada Midoobay ee ka howl gala Soomaaliya. Ninkan ayaa baddali doona danjire Nicholas Haysom oo u dashay dalka Koonfur Afrika, […]
Madaxwaynaha Soomaaliya oo ka Qaybgalay Shirkii ay yeesheen dalalka Jaamacadda Carabta
Madaxweyne abdilaahi farmaajo ayaa ka qayb galay shirkii jaamacada carabta shirkan oo si deg deg ah ku qabsoomay.
Wasiirka Gaashandhiga Somaliland abdiqani ayaa markii u horaysay ka hadlay ciidamo la sheegay in ay somaliland ka goosteen.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo ka hadashay arrintan ayaa sheegtay in ay aqoonsan tahay madaxnbannaanida Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Nebiyat Getachew, ayaa BBC u sheegay in “Puntland iyo Somaliland ay u aqoosan yihiin in ay hoostagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya”. “Waxaan safaarad ku leenahay Muqdisho. Somaliland iyo Puntland waxaan ku leenahay […]
Dawladad Soomaaliya aya maanta muddo toddobaad ah ugu yeedhay inay dalka ku soo galaan safiirrada Soomaaliya u fadhiya dalalka Suudaan iyo Masar. Ma jirin faahfaahin laga bixiyay sababta loogu yeedhay sida dhaqsada ah inay dalka u soo galaan labada danjire ee dalalka Suudaan iyo Masar u fadhiya Soomaaliya. Balse u yeedhista safiirka ayaa ku soo […]
Dawladda Itoobiya ayaa mar kale soo jiitadatay indhaha Soomaalida ka dib markii Somaliland u diiwaan galisay dal ahaan. Barta rasmiga ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa dal ahaan u diiwaan galisay Jamhuuriyadda Somaliland. Arrintan ayaa imaanaysa maalmo uun ka dib markii dawladda Itoobiya ay daabacday khariidad muujinaysa iyo Itoobiya iyo Soomaaliya ay hal […]
Kenya remains key to Somaliland’s quest for international recognition, the Horn of Africa country’s Ambassador to Kenya Bashe Omar has said . Last week Somaliland leaders met Kenya’s top political leaders and business community to discuss ways of strengthening economic and political partnerships. Somaliland leaders, who met former Prime Minister Raila Odinga in Nairobi, pushed to […]
Gabadh Da’yar oo Toori Lagu Dilay Gaalkacyo
Gabadhan oo la sheegay in la dilay wakhti ay ka soo baxday salada taraawixda ayaa loo adeegsaday dilkeeda midiyo
Dowlad-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay hakisay wadashaqeyntii kala dhaxeeysay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyadda Puntland ayaa lagu sharraxay qodobbadii soo dedejiyey burburkii shirkii Garoowe, kaasoo qabsoomay horraanta bishan. Qodobbada dhaliyay inuu shirka ku dhammaado iyada oo aan natiijo laga gaarin ayaa isugu jiray; xukuumadda oo diidday joojinta […]
Somaliland oo sii daysay ‘maxaabiis ay Puntland ka haysay’
Madaxwaynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa Cafis Madaxwayne Waxa uu u fidiyay maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii ciidamadda somaliland iyo kuwa maamulka Puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq. Afhayeenka Madaxwaynaha Maxamuud Warsame Jaamac oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyadda ayaa Sheegay in sababta loo sii daayay ay tahay sidii deegaankaasi uga dhalan lahayd nabad […]
Waxaa sii xooggeysanayaa awoodda ururka Al-Shabaab, inkastoo uu jiro dagaal socday muddo 12 sanno ah oo ka dhan ah, kaas oo ay riixeyso Qaramada Midoobey, balse ururkan ayaa leh shabakado sirdoon ah oo isku xiran oo si weyn ay ugu tiirsan yihiin, sida ay ku warrameyso weriyaha BBC Mary Harper. Waxay tiri, markii aan kasoo […]
Itoobiya oo Jawaab ka bixisay Khariidaddii muranka dhalisay ee Soomaaliya loogu daray dalkeeda
Mas’uuliyiinta Dowladda Itoobiya ayaa war kooban oo ay soo saareen ku sheegay inay ka xun yihiin sawir muran xoog leh dhaliyay oo lagu daabacay bogga internet-ka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Qoraalka oo la soo dhigay isla Website-ka sawirka lagu daabacay ayaa la yidhi: “Waxaan fahannay in sawir khaldan oo […]
: Madaxweynaha Somaliland Oo Soo Xidhay Wejiga Koowaad Ee Barnaamijka Shaqo Qaran
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta si rasmi ah u soo xidhay wejiga koowaad ee barnaamujka carbiska dhallinyarada ee shaqo qaran oo muddo bilo ah ka socday deegaanka Darar-weyne ee dhinaca waqooyi Bari kaga beegan caasimadda Hargeysa. Munaasibadda uu madaxweynuhu kusoo xidhay wejiga koowaad ee barnaamujka shaqo qaran, ayaa waxa ka qaybgalay xubno […]
Puntland oo shir deg deg ka yeelanaysa gobolka Sanaag
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya xiisadda ka taagan gobolka Sanaag iyo dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkaasi, iyadoo lagu waramayo in ciidamo maleeshiyaad ah ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Sanaag. Golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa kulan deg deg ah ka leh xiisadda kasoo cusboonaatay deegaanada gobolka Sanaag, iyaga […]
Galmudug Iyo Puntland Oo Ka Horyimid Sharciyada Baatroolka Iyo Doorashooyinka
Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug oo kulan maanta ku qaatay Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa isla gaadhay heshiis, iyagoo sidoo kale ka hor yimid sharciyo ay Baarlamaanka meel mariyeen iyo kuwa hada horyaala. Kulanka ay yeesheen Siciid C/llaahi Deni iyo Axmed Ducaalle Geelle Xaaf, waxaa ku wehlinayay Wasiiro iyo Xildhibaano ka kala tirsan labada maamul. Qodobada […]
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay go’aankii dowladda Kenya ay ku xadiday Dal ku galka Visaha, isla markaana dib u soo celisay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Halkan hoose ka akhriso war saxaafadeedka: Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (“dowladda Soomaaliya”), iyada oo qaddarinaysa Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Jamhuuriyadda […]
Qaraxii Muqdisho oo dhimasho iyo dhaawac sababay
Labo ruux ayaa dhimatay 12 kale ayaana ku dhaawacan tay qarixii ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay shaaciyeen gawaarida gurmadka degdegga ah ee Aamin. Ururka Alshaab ayaa sheegtay qaraxan gaariga loo adeegsaday oo ka dhacay degmada Boon Dheere. Waa waqaraxii saddexaad ee noociisa ah ee loo adeegsado baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, tan iyo […]
A delegation from the two of Somaliland’s political parties, UCID and Kulmiye departed for Nairobi today to meet with Somaliland Donor Working Group chaired by the UK. The delegation is led by the chairman of UCID Eng Faisal Ali Warabe and the Minister of Interior Hon. Mohamed Kahin Abdi representing Kulmiye. Other members include Abdiasis […]
Ciidamada somaliland iyo kuwa maamulka Punland ayuu dagaal ku dhexmaray deegaanka dhamala Cagara oo ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaalkan oo khasaare dhimasho ahi ka dhashay ayaa yimid ka dib markii wasiirka waxbarashada maamulka Puntland uu isku dayey inuu socdaal ku yimaado deegaanka Carmala oo ka tirsan gobolka Badhan oo uu wakhtigaas ku sugnaa wasiirka cadaalada […]
Qaramada Midoobay oo Ka Hadashay Horumarka Soomaaliya
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay hormar ka samaynayso dhanka dhismaha dawlad awood leh oo shaqaynaysa. Balse waxa uu sheegay in dawladdu ay wax ka qabato arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin: “Dhibaatada argagixisada, iska hor imaadyada hubaysan, dagganaansho la’aanta siyaasadeed iyo musuqmaasuqa.” Antonio Guterres ayaa ku sheegay warbixin uu […]
Maxaad kala socotaa Suldaanka ugu da’da yar Soomaaliya?
Soomaalida ayaa waxaa inta badan ay yihiin kuwa ku dhagan dhaqanka soo jireenka ah. Dhaqanka Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah in Suldaannimada la kala dhaxlo oo marka qabiilka uu ka dhinto Suldaankooda uu badalo wiilkiisa ama walaalkii. Hadaba waxaa mararka qaar dhacda in Suldaanka marka uu dhinto la caleema saaro wiilashiisa oo aad u […]
Xeerbeegti Maraykan ah ayaa heshay in uu dambi gaystay nin Soomaali ah oo taxi kaga shaqaysan jiray gobolka Virginia ee dalka Maraykank, isaga oo jirdil gaystay intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya qaybihii dambe ee siddeetameeyadii. Farxaan Taani Warfaa ayaa toddobaadkii hore ku makhraati furay Yusuf Cabdi Cali oo ah nin horay kornayl uga […]
Kenya oo dal-ku-gal u diidday wasiiro iyo xildhibaanno Soomaali ah
Dowladda Kenya ayaa dal ku gal u diidey xildhibaanno iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaalaiya, kuwas oo muddo saacado ah ku xannibnaa garoon ku yaalla Kenya, sida ay ila wareedyo u sheegeen VOA. Wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Cismaan Libaax Ibraahim, Ilyaas Cali Xasan, oo ka tirsan aqalka sare […]
Sharciga batroolka Soomaaliya oo la meelmariyay
Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federaalka ayaa ansixiyay Sharciga Batroolka. 154 Xildhibaan ayaa fadhiyay golaha, 4 oo ruux oo kali ah ayaa diiday. Xeerkan oo soo jiitay ayaa door muhiim ah kulahaa ismariwaagii maamul goboleedyada iyo dawladda faderaalka ah. Maamul goboleeyada ayaana sheegay in dawladdu ay ansixinayso xeerar aan laga tashan. Ma jiraan war rasmi ah […]
Deg Deg: Waddani Oo Ka Deyriyay Xasarad Iyo Buuq Labada Xisbi Ee Kale Dalka Gelinayaan
Nuxurka Kulan dhex-maray Madaxweynaha Jubbaland iyo Safiirka Britain
Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa Magaalada Kismaayo kula kulmay Safiirka Dowlada Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Fender. Labada Masuul ayaa ka wada hadlay xaalada Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan iyadoo gaba gabadii ay Saxaafada la hadleen. Danjire Ben Fender ayaa sheegay in Madaxweynaha ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab […]
Somaliland Oo Joojisay Shiidaalka Ka Yimaada Dalalka Jaarka Ah
Wasaaradda Ganacsiga, Wershadaha iyo Dalxiiska Somaliland ayaa joojisay shidaalka dhinaca xuduudaha dalka ka soo gala ee ka yimaada dalalka jaarka. Aagaasimaha guud ee Wasaaradda Ganacsiga,Wershadaha iyo Dalxiiska Jamhuuriyadda Somaliland Mr. Mustafe Godane Cali Bille, oo xafiiskiisa shir jaraa’id ku qabtay ku sheegay inay joojiyeen shidaalka dhinaca xuduudaha ka soo gala dalka, kaas oo uu ku […]
Xiisadda Maraykanka Iyo Iran Oo Kasii Daraysa
Iran ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka kasii darista “aan la aqbali karin” ee xiisadda ka dhex oogan labada dhinac, waxayna sheegtay in Tehran ay muujineyso is-xakameyn, inkasta oo Washington ay ka baxday heshiiska Nukliyeer. Xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku shareertay kadib markii toddobaadyadii ina dhaafay uu Maraykanka maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka, iyo diyaaradaha bambooyinka […]
Madaxweyanaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Cumar Cagjar, ayaa sheegay in lagu khaldamay in maamul kasta oo ka tirsan dalka Itoobiya loo sameeyay ciidamo amni oo u madaxbannaan arrimaha amniga gobollada isla markaasna arrintaasna ayna sii socon karin. Waxaa uu sheegay in arrintan ay horseeday dhibaatooyinka amni darrada ah ee ka taagan dalka Itoobiya. wuxuu intaas […]
Ciidamada Dab-demiska Caasimada Hargeysa ayaa waxay soo bad-baadiyey ilmo yar oo musqul lagu riday. Ciidanka ayaa waxay ku guuleysteen in ilmahan yar ka soo samata-bixiyeen musqusha isagoo nool, iyagoona ilmaha yar oo caafimaad qaba ku wareejiyey Cisbitaalka weyn ee Magaalada Hargeysa. Ciidamada Dam-demiska ayaa qoraal ay kaga waramayaan siduu u dhacay howl-galkaasi samato-bixintu ayaa waxay […]